Aqoonsiga Somaliland oo Ceel ku dhacay | KEYDMEDIA ENGLISH
Dowladda Ingiriiska ayaa cadeysay mowqifkeeda ku aadan gooni isku-taagga Somaliland, iyadoo u sheegtay maamulka Muuse Biixi inuu aqoonsiga ka raadiyo Muqdisho.
LONDON - Natiijo la'aan ayay kusoo dhamaatey doodii Xildhibaanada Aqalka Hoose ee Baarlamaanka Ingiriiska [House of Commons], ay ka yeesheen aqoonsiga maamulka Somaliland.
Xildhibaan aad ugu ololeeya aqoonsiga Somaliland oo katirsan Xisbiga haya talada Ingiriiska ee [conservative party], oo lagu magacaabo Gavin Williamson, lagana soo doorto South Staffordshire ayaa dooda geeyay Baarlamaanka Talaadadii.
Gavin Williamson ayaa mar dhaw booqdey Hargeysa, isagoo kula soo kulmay Madaxweyne Muuse Biixi, waxaana muuqata in dooda ictiraafka Somaliland, ee uu geeyay Baarlamaanka Ingiriiska uu dhaqaale badan ku qaatey. Ma jiri karto dan aan taasi ahayn oo ugu jiri karta howshan culus inuu qabto.
Dooda oo ahayd mid kooban, oo aan ahmiyad weyn la siinin ayaa kusoo idlaatey go'aan la'aan, waxaana Xildhibaanada gadaal ka riixayay moshinka ay ku guuldareystay in qadiyadda Somaliland qaraar laga soo saaro, oo Baarlamaanka Ingiriiska aqoonsado.
Wasiirka Dowladda Ingiriiska u qaabilsan arrimaha Afrika haweenayda lagu magacaabo Vicky Ford, taasoo sidoo kale ah Xildhibaan ka timaada Chelmsford, kana mid ah xisbul-xaakimka conservative party ayaa sheegtay in aqoonsiga Somaliland uu ku xiran yahay Muqdisho.
Doodda Aqalka Baarlamaanka waxay hoosta ka xariiqeysaa mowqifka aan is baddalin ee ay dowladda UK ka taagan tahay arrinta Somaliland. Waa howl u taalla Somaliland iyo Dowladda Federaalka Soomaaliya inay go'aan ka gaadhaan mustaqbalkooda. Waan sii wadi doonnaa inaan arrimaha dimuqraadiyadda, amniga iyo horumarka kala shaqeyno dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo Somaliland," ayay ku tiri Vicky Ford.
Kahor dooda Baarlamaanka, waxay Vicky Ford wadahadal khadka Taleefonka la yeelatay Wasiirka Arrimaha Dibada Soomaaliya Cabdisaciid Muuse Cali, oo ay kawada hadleen xoojinta iskaashiga ku dhisan wax wada qabsiga, ixtiraamka midnimada iyo madax-baannaanida Qarannimo ee Labada Dal.
Comments Topics: ingiriiska somaliland soomaaliya